Users aaladaha android waa run ahaantii hoosba, doorasho marka ay timaado app fariimaha ugu wanaagsan ee android kaliya adigoo aad Google ciyaari dukaanka isagoo alaab-qaar ka mid ah oo ka mid ah app Fariin android. Ogaanshaha fariin qoraal ah waa qayb weyn oo isticmaalka telefoonka maalin kasta dad badan oo aan kuwan oo dhan app Fariin android aad ka heli waxay ka dhigan tahay oo tayo leh, waxa muhiim ah in la muujiyo 13 app fariimaha ugu sareeya ugu wanaagsan ee android ka dib markii cilmi taxadir iyaga on. Ogow in Dalka Chine waxay ka dhigi isticmaalka signalada telefoonka android iyo qoraalka lacagta fariin aad mobilada iyo inaan la qaldin Rasuullo deg dega ah sida WhatsApp ama Rasuul Facebook.
2. Google Rasuulka
10. ahaan umuuruhu SMS
12. Text adkaada
Ku saabsan mid ka mid ah app ugu fiican sms u android, dadka isticmaala iyo saxaafadda ayaa inta badan lahaa dib u eegista weyn u SMSka ee muddooyinkii dhowaa. Waxaa loo adeegsan karaa oo keliya ma aha qalabka android, laakiin sidoo kale on Mac, daaqadaha iyo daalacashada internetka. Waxay bixisaa faa'ido ah u ogolaanaya dadka isticmaala boostada ka kiniin ama computer by kaliya la isticmaalayo ay lambarka taleefanka qalab android. Waxa kale oo ay taageertaa MMS oo Fariin group oo xirmi kartaa adeegyada sida Google drive iyo DropBox. Dhinaca kale waa in badan oo ka mid ah qaababka ay sare u baahan jaraaidka xubinimada caymiska oo kharash ku saabsan $ 9.99 halkii sanno ah.
Sida mid ka mid ah app fariin ugu wanaagsan ee android, Rasuulka Google ay ku qalabeysan yahay oo dhan muuqaalada aasaasiga ah ee aad u baahan tahay ah oo waayo-aragnimo fariin xiiso leh. Waxaa la iman indhaha eegayey interface design. The faa'iidada adeegga waa in, marka lagu daro ka mid ah diraya qoraalada lacag la'aan ah, waxa kale oo aad samayn kartaa duubo fariin maqal ah oo sawirro loo qaado iyadoo la isticmaalayo app. Khasaaraha waa in ka badan murjin kara arrimaha marka la isticmaalayo la tayada cida ka qaldan.
Mid ka mid ah ugu wanaagsan ee app sms android, muuqaalada SMS chomp ka mid ah qufulo fariin, app habayn qufulo, madow iyo popups reply deg deg ah. Waxa kale oo ay ku faantaa mid ah fursadaha gaarka ah u xoog badan oo soo diyaariyeen balaadhan oo ah emojis. Waxa xiiso leh in la isticmaalo sida ay leedahay interface fudud. Ayaa khasaare werinayo oo kaliya waa in fursadaha u Customization yihiin wax ka yar ugu barnaamijyadooda kale ku jirta qeybta la mid ah.
8sms waa android app ah fariin wanaagsan oo ku faantaa qaar ka shaqeynta daray markii qaar ka mid ah oo kale app stock SMS marka la barbar dhigo. Waa arrin aad u fududahay in la isticmaalo iyo leeyahay tamarta badbaadinayo theme madow. Waxaa kale oo lacag la'aan ah si ay u isticmaalaan. Khasaare waa in ay soo Bixiyaa wax xayeysiis rabin maxkamad 14 maalin ah oo ku dhawri doontaa, ilaa aad ka soo muuqday aad deeq ka dib.
Haddii aad hore u yihiin KitKat, ka dibna waxa ay wax ku cusub waa sida ay tahay app ah stock qoraalka fariimaha ka android 4.4 KitKat. Waxaad ka soo baxay waxaa ka hubin kartaa haddii aad telefoonka ka weyn raadinaya waayo-aragnimo ah ee KitKat. Waxay leedahay muuqaalada ka Androids barnaamijyadooda qoraalka hore. Users ee app this ka cawdaan socodka gaar ahaan isticmaalaya on qoraalkii ka weyn ee Android.
A app fariin weyn, sababtoo ah waxaa bixiya was design wax L Android cusub si app. Tani ayaa waxa ay sii rafcaanka. Muuqaalada ay ka mid sabayn farriimaha iyo popups reply deg deg ah. Mid ka mid ah faa'iidooyinka waa in sharcigaasi waafaqsan yahay Duugga Android oo PushBullet haddii aad qabto wax u eg Gear Samsung ay Live.
HoverChat waxay keentaa nooca xumbo pop-up ee ka shaqeynayaan helay on Facebook ee chat madal si app ee fariimaha qoraalka ah ee qalabka android aad. Waa maxay taasi ka dhigan tahay waa in wax kasta meesha aad ku sugan tahay app ama goobta screen, fariin kasta oo qoraalka cusub soo celin doonaa ilaa pop ah ee hore wax kasta oo aad samaynayso. Faa'iidada waa in aad si degdeg jawaabi kartaa wargelinta arbushin ilaa haddii aad rabto in aad. Si kastaba ha ahaatee, dadka isticmaala caban wareer ka timi ah baaritaan pop fariin khasaaro weyn sida.
Kale oo oday ah in ay barnaamijyadooda SMS. Waxa kaliya heshay casriyayn ah dabayaaqadii 2014, iyadoo ay sabab u update dukaanka play ah. Waxay leedahay wax badan oo mawduucyada iyo qoreysa jacaylka users android. The pros ee app this waa in aad qabto doorashada Iyada oo sida app this qaban doonta aad fariimaha xilka iyo wax kasta oo soo socda sida aad rabto in aad. Marka labaad, waxaad saxiixi karaa app la faahfaahin Facebook iyo arko xiriirada Facebook profile PIC. Con waa in uu leeyahay version a pro kaas oo bixiya hawlaha ka badan, laakiin aan lacag la'aan ah.
App SMS Tani waxay u muuqataa mid aad u yar oo quruxsan. Waxay leedahay farqiga u af badan oo ka dhan barnaamijyadooda kale SMS. Waxay leedahay tab fudud dhigay ilaa halkaas oo saaxiib ee profile sawirada waxaa lagu hayaa dhanka bidix oo si fudud u mari kartaa tab ee wada hadalka. Si kastaba ha ahaatee, waxay u muuqataa mid nadiif ah oo si fiican loo maamulo, laakiin dadka isticmaala caban waxa ay u muuqataa bararay oo culus.
Maxay ka badan oo aynu ka nidhaahno xuubsiiban karo SMS. App Tani waa wax tagi ay ahayd in. Inay eegto Google+ in style. Its orange default interface muuqataa wanaagsan iyo kabacdi u dhexeeya sheekada sidoo kale waa wanaagsan yahay. Waxaa la iman qaar ka mid ah fursadaha Customization pre rakibay laakiin ka biyodiiday waa in aad bixin doonto in ay la wareegaan mawduucyada qaar ka mid ah si fiican u pack Customization ah.
A ammaanka aad u text miyir app Fariin u qalab android aad. Textsecure la dhammeeyey sir doonaa isgaadhsiinta aad si loo soo afjaro maamuuska sirta mar lambarka waxaa soo galay. Faa'iidada waa in fariimaha waa kuwa ammaan ah ee safarka. Si kastaba ha ahaatee, khasaare waa ammaanka aad u xad-dhaaf ah u waxoogaa yar anti social samaynta.
Dhab ahaantii ma app fariin ah oo iniinahoodu ku dhex jiraan, laakiin qalab aad u wanaagsan u helo oo fariin u diraya via your computer. Inkasta oo aan la haynin xirmo app ah in qalab android aad, waa waqti dheeraad ah si aad u app SMS jira. Waxay leedahay wanaagsan gurmad SMS dhisay iyo soo celiyo doorasho. Khasaare waa in aysan app ah si dadka isticmaala ma ku raaxaysan karaan tiro balaadhan oo ah faa'iidooyinka iyadoo la isticmaalayo.
App fariin qabsado Il bixiya tiro balaadhan oo ah mawduucyada, jawaabo deg-deg ah, jadwalka fariin, hab habeenkii, Fariin group iyo Customization. Waa lacag la'aan ah app ee aasaasiga ah. Si kastaba ha ahaatee, con waa in lagu furo horay u qoreysa qiyaastii $1.99 in app iibsiga.
> Resource > Top List > Top 13 Apps fariin qoraal ugu wanaagsan ee Android Devices